R Zar Ni..သီချင်းတွေပါ
01* 16 Angle.mp3
02 *A Sait Tat Dream.mp3
03 *Ma lwan Chin Bu.mp3
04* This is Love.mp3
ဖိုးသားရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေ အသစ်ပါ
01 Moe (မိုး)
02 Seik Ku Rin Thu (စိတ်ကူးယဉ်သူ)
03 Lay Hte Ka Eain_2 (လေထဲက အိမ်)
04 Kabar Ti Tha Rwae (ကမ္ဘာတည်သရွေ့)
05 Pyaung Le Pay Par (ပြောင်းလဲပေးပါ)
06 Kyay Zu Par (ကျေးဇူးပါ)
07 Ayoe Thar Sone (အရိုးသားဆုံး)
08 Achit Yu (အချစ်ရူး)
09 Kyay Nat Tal (ကျေနပ်တယ်)
10 A Yeik (အရိပ်)
အယ်ဘမ်တစ်ခုလုံးဒေါင်းရန် ပတ်ဝေါ့ = EML
ဖိုးသား ကမ္ဘာတည်သရွေ့ (အယ်ဘမ်)
01 De Night Lay ( ဒီညလေး)
02 Arr Line Yae Chit Thu (အားလုံးရဲ့ချစ်သူ)
03May Yi Ya (မေရိယ)
04D Saung (ဒီဆောင်း)
05Mwe Nay Chin Lay (မွေးနေ့ရှင်လေး)
06Ba Wa Yae A Chin (ဘ၀ရဲ့ အရှင်)
07Luu Thar Myar A Twat (လူသားများအတွက်)
09Nyein That Chin A Shin (ငြိမ်သက်ခြင်း အရှင်)
10Saung Pa Shi (ဆောင်းပန်းချီ)
11Ei Ma Nwe La (မောနွေလ)
12 Arr Lone A Twat (အားလုံးအတွက်)
Lလွန်းဝါ, ခရီစတိုဖာ, ဆုန်သင်းပါရ်, ရတနာဦး, ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဖြူဖြူကျော်သိန်း -မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲနေတယ်
အယ်လင်- လှည့်ကွက် (ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များ)
07. ချစ်ခြင်းရဲ့ စိတ္တဇ
City FM (10) ဆက်ချစ်နေမယ် – လူစုံ
01. ပင်တိုင်စံအတွက် အချစ်ရဲ့ အလင်းရောင် (ချမ်းချမ်း+နေနေ)
02. ဆက်ချစ်နေမယ် (ဇော်ပိုင်)
03. နင်ပြန်လာမယ့်အချိန် (လွမ်းပိုင်+Bunny Phyo + နန္ဒထွန်းတင်)
04. အိမ်မက်ထဲကအဖြေ (အာဇာနည်)
05. တစ်ချက်လေးစောင်းငဲ့ကြည့်ဦး (ညာဏ်လင်းအောင်+၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း)
06. စုန်းမ (တင်ဇာမော်)
07. ဆန္ဒမစောနဲ့ (ဒီဖြိုး+စိုးပြည့်သဇင်)
08. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (ဖြူဖြူကျော်သိန်း)
10. ယုဇန နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ (နေတိုး)
11. ကိုယ်…. သိထားရက် (ချမ်းချမ်း)အာ
ရှူးတိုးတိုး - ဘန်နီဖြိုး
အသဲကွဲဘုရင်မ - ဖြူဖြူကျော်သိန်း
မ - သူရ
မွေးနေ့ - ဘန်နီဖြိုး ၊ ကိကိ
အတူတူခုန်လိုက် - ထက်ယံ ၊ ထက်အောင်လှိုင်
မန္တလေးမြို့ရဲ့ မိန်းမလှလမ်းညွှန် - ထက်နိုင် ၊ ကိုဦး Feat သော်ကြီး
ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ - MC ကြယ်လေး Feat နိုးနိုး
နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း - ထက်နေခြည်
ကိုယ်ရံတော် - ရွှေရည်ဖြိုးမောင်
မေ - လွမ်းပိုင် ၊ ဇေရဲ ၊ ဂျောက်ဂျက်
တောင်းပန်တယ် - အောင်လ ( Reason )
ဘ၀သစ်ရဲ့မာတိကာ - အောင်လ ( Reason )
ဘယ်သူ့အတွက်လဲ - Htet Yan , Little Boy (2)
အမြတ်နိုးဆုံး - Jumpa , Freddy , MC Tay Za , Pa Sout
မ..မ^ကောင်လေး - ရိုးရာ
နားနားဘေးမှာ - MC လွှမ်းပိုင် ၊ MC ဇေရဲ
I Love You - Sai Sai ( MM Song )
မေ့လိုက် - ရဲလေး ၊ ကိကိ
ကြည်နူးခွင့် - မေစံပယ်ညို
Chatting ( MM Song )
Stay With Me - Bunny Phyoe
တွေ့မယ် ... သတိထား - Barbu
ဖုန်းနတ်သမီး - Snare Feat : ဧပရယ်
Ever Golli - S@i S@i
မလွမ်းလောက်ပါဘူး - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
Right Now ( Na Na Na ) - Akon ( Eng Song )
ဟိုအရင်လို - Bunny Phyoe
ချစ်တယ်ဟုတ် - Bunny Phyoe
အလွမ်းပြေအနမ်း - Bunny Phyoe
အတိတ်မေ့ခြင်း - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ကောင်းမြတ်
Leave Me Alone ( Remix ) - ရဲရင့်အောင် ( MM Song )
မှားနေ - NC 13
Remember Kiss ( MM Song )
ငါ့နေရာ - ရဲရင့်အောင်
Leave Me Alone - ရဲရင့်အောင် ( MM Song )
မျှော်လင့်မိတဲ့ ငါ့နတ်သမီး - Nasty - ပြည့်ဖြိုးသူ
Let Me Kiss You - ရဲရင့်အောင် ( MM Song )
လက်ဆောင် - ယုန်လေး ၊ ခွန်းဆင့်နေခြည်
ဝေးသွားလို့များ - ဟိန်းသစ်
ပဲ့ကိုင်ရှင် - ဇော်ဝင်းထွဋ်
ဘ၀ရထား - ရင်ဂို
နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာ - R ဇာနည် ၊ ချောစုခင်
မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် - ရတနာဦး
အင်းလျားလမ်းကပန်းဆိုင် - ဟန်ထူးလွင်
ညာတာပါတေး - ကျော်ထွဋ်ဆွေ
နောက်ထပ်တစ်ယောက် - စိုးကြီး
အဝေးကချစ်ရတာ - ထက်မွန် ၊ Keller
အလွမ်းသင့်ပန်းချီ - အောင်လ
ဝေးပြီးတဲ့နောက် - G-Latt
မချစ်တဲ့သူငယ်ချင်း - ကိုထက် ၊ Dictionary
I Love You Baby - MC Wai Linn
Danger ( Rock Version ) - Snare ၊ Sai Sai
အဖြူရောင်သတို့သမီး - Roll 1 Feat Bobby Soxer
မင်းသိလာမယ် - ကျော်သီဟ
ပုံယောင်လေး - Zero ( zero.singer@gmail.com )
Baby ( New Version ) - MC Wai Linn
တကယ့်ပုံပြင် - ရိုးရာ
နီးစပ်ချိန် - ရှိန်း ၊ ရှမ်းလေး
Cruel Baby ( ရက်စက်တဲ့ ကောင်မလေး ) - MM Song
ပြန်လာခဲ့ပါ - ဇော်ထက်
Down - Jay Sean ( Eng Song )
မသိချင်ယောင်ဆောင် မျက်နှာလွဲ - Bunny Phyoe
နင်စေရင် - ပူစူး
နင်ဟာငါ့ရဲ့ - ရဲလေး
“ စ ” လုံးကချစ်သူ
အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း - ဥာဏ်လင်းအောင်
နားလည်မှု - Little T
အရမ်းပဲဖြစ်နေပြီ - ရိန်မိုး
Daddy - S@i S@i
Leep On Loving You ( MM Song )
ကောင်းကင်ပေါ် - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် - Bunny Phyoe
အဝေးကချစ်သူ - Soul Ja Lin Latt Feat. Sai Htoo
စိတ်ညစ်တယ် - Fabulous
ဘာလိုသေးလဲ - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ကောင်းမြတ်
ခဏတာ - G Latt
Old Days - Bunny Phyoe ( MM Song )
အသေချာဆုံး - 9one - ချမ်းငြိမ်းကို
L•O•V•E Kgmalay - ရဲရင့်အောင် ( MM Song )
စွမ်းရည် - ဂျောက်ဂျက်
ဆွဲဆောင်သူ - G Family
Don't go - ရဲရင့်အောင် ( MM Song )
လိုသလိုပုံသွင်းလို့မရတဲ့အချစ် - Ahboy - သီရီဆွေ
ကြေကွဲစရာ - R ဇာနည်
တကယ်ဆိုရင် - R ဇာနည်
မျက်ဝန်း - L လွန်းဝါ
ကျေးဇူးပြု၍ - ဟန်ထူးလွင်
မင်းနဲ့အတူရှိချင် - သိန်းလင်းစိုး
ကြွေနေပြီ - Hemale
1*စိုင်းဆိုင်မော(၀်) စကားပြောသော အမေ့နှလုံးသား (ရှမ်းတေးစီးရီး)
2*စိုင်းဆိုင်မော(၀်) 98 အသည်းလက်ဆောင် (ရှမ်းတေးစီးရီး)
* စကားပြောသော အမေ့နှလုံးသား
* ရှမ်းပြည်ရဲ့ ဆောင်းရာသီ
* စိုင်းဆိုင်မော(၀်) ရဲ့ အမှာသီချင်း
* ရင်ထဲက ပုံပြင်
* တို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာသော ဆောင်းရာသီ
* နောင်အလိုလိုက်မယ့် စိုင်း
* ဒီလောကမှာ မင်းကို အချစ်ဆုံး
* ချစ်ရင် အဖြေပေးပါ
* ခွန်ဆမ်လော နဲ့ နန်းဦးပြင်
* မျက်စိမှိတ်ပြီး ချစ်နေသူ
* နောင့် မမေ့ပါနဲ့
* မတတ်နိုင်ပါ – Reason
* ရင်ထဲက – ဘန်နီဖြိုး
* အိုး….ဟော့တယ် – စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
* နာခံမယ့်လူ – သားကြီး
* အငြိုးနဲ့ မိုး – စန္ဒီမြင့်လွင်
* ၁၀၀တန် – လွှမ်းပိုင်
* ကျေးဇူးတင်တယ် – Wanted
* ဒွိဟ – Bobby Soxer
* မိုက်ချက်ကတော့ကမ်းကုန် – Snare
* အဝေးက – မိစန္ဒီ
* မိတ်ဆက်ပြီးတော့ – ရဲလေး
* ဘ၀အသစ်သို့– Nov24
* ရူးတော့မယ် – Arr_T
* ပါးပါးလေး – ဂျောက်ဂျက် ၊ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
* နောင်တ – နေ၀င်းကို
*. ဒီရေဒီလှေ – လေးဖြူ
* ဖြတ် – Rဇာနည်
* ရင်ခုန်ရလွန်းလို့ – ဇော်ပိုင်
* လမိုက်ည – မျိုးကြီး
* အိမ်လွမ်းသူ – ၀ိုင်ဝိုင်း
* ကမ်းမရှိတဲ့အချစ် – အငဲ
* နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော် – လေးဖြူ အငဲ
* ယဉ်ယဉ်လေးရူး – အာဇာနည်
* ဒီဇင်ဘာ – လေးဖြူ အငဲ မျိုးကြီး
* အဆိပ်ခွက် – မျိုးကြီး
*ပန်းနုချစ်နှုတ်ခမ်း – ဇော်ပိုင်
* စည်း – ၀ိုင်ဝိုင်း
အသစ်ကမ္ဘာ…သို့ – Iron Cross
* အလင်းရောင် – လေးဖြူ
*၀ုန်းဒိုင်း – One Way
*.လတ်လတ်ကိုထလို့ - One Way
*အရာရာတိုင်းအတွက် – သိန်းလင်းစိုး _ MHL
*လုပ်ချင်ဦး – Snare _ Han Zar Moe Win
*လုပ်ပါလုပ်ပါ – G3
*ဂဠုန်လား နဂါးလား – Satan _ Doe Doe
*ကျောင်းသားဘ၀ – MHL _ Zay Ye
*အမုန်း လက်ဆောင် – Thar Gyi
* ပျားရည်ဆမ်း – G- Family
* လိမ့် – Hip 2
*ပြည့်စုံချိန် – Kyi Thar ,Dj Nyi Nyi, Thaw Tar
*အတ္တမဲ့ ချစ်သူ – Nyi Nyi
*စကားတခွန်း – ဟိဏ်းသစ်
*ရှိုးတိုးသျှမ်းတန်း – နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
* အချစ်ရိပ်မြုံ – ကေကေတီ+နေနေ
* တစ်ချိန်ပြန်လာမှာပေါ့ – ကေကေတီ
* မျက်ဝန်းစကား – ကေကေတီ+ချမ်းချမ်း
* ဒီအတိုင်းလက်ခံရုံ – ကေကေတီ
*) ကမယ်ဆို – ကေကေတီ+ဗန်သော့ဒ်ကျင်း
* တစ်နေ့ တစ်နေ့ – ကေကေတီ
*ခွဲခွာခြင်းကဗျာ – ကေကေတီ+ထိုက်ထိုက်
* ချန်ပီယံ – ကေကေတီ
* သုံးရာသီပြဇာတ် – ကေကေတီ+မို့မို့လွင်
* ရှုံးတဲ့အခါ – ကေကေတီ
* အပြစ်မဲ့အချစ် – ကေကေတီ+နီနီခင်ဇော်
* ရွှေရောင်အချစ်မီး – ကေကေတီ
မျိုးကြီး - သီချင်းစုစည်းထား
*ကိုယ်နဲ့ မင်းနဲ့ သူတို့နဲ့
* အခု ကျွန်တော်လေ
* သူစိမ်းတွေလို နေလိုက်မယ်
* အဖြူရောင် စိတ်ကူးများ
* ငါ့ရဲ့ လမင်း
* ဒါလီနေ့ 
* နောက်ဆုံး အနမ်း – ချမ်းချမ်း
* မုန်းမေ့ဖို့ ခက်တယ် – စိုင်းစိုင်း ၊မိုးမိုး
* ချစ်ခြင်းရဲ့ နေ့ သစ်တိုင်း – ဇော်ပိုင် + စိုးပြည့်သဇင်
* သီးသန့် တွေ့ ဆုံခန်း – ရဲလေး + အေသင်ချိုဆွေ
*ရင်ခုန်ရင်းပျံဝဲ – အာဇာနည် + ၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်း
* ဘာမှမပြောင်းဘူး- Jenny၊ ခေမီကို
* အချစ်တစ္ဆေ – ရတနာမိုင် + အောင်ရဲလင်း
* ဝေးနိုင်မှာလား – မင်းမော်ကွန်း + ရေဗက္ကာဝင်း
* တီအားမို- ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ဒရာဗို၊ဖြူဖြူကျော်သိန်း
* အော် မိန်းမ – ဖြိုးသီဟ၊သွှန်းရွှေသျှမ်း၊အယ်နီရှိုင်း
* အို ကမ္ဘာမြေ – စိုင်းစိုင်း၊ချမ်းချမ်း
* ဒီရေဒီလှေ – လေးဖြူ
*နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော် – လေးဖြူ အငဲ
*စည်း – ၀ိုင်ဝိုင်း
*အသစ်ကမ္ဘာ…သို့ – Iron Cross
*အလင်းရောင် – လေးဖြူ
* မျက်ရည်များနဲ့ မတားချင်တော့ဘူး – ဇော်ပိုင်
* မြေကြီးနင်းသူများ – ချစ်သုဝေ
ချစ်သူ – Nကိုင်ရာ
* ငါ့အနား နင်ရှိရင်ပြီးတာပဲ – နောနော်
* ပြန်ဆုံမယ် – ဖြိုးကို
* ဟက်ပီး နယူးရီးယား – ရေဗက္ကာဝင်း
* တစ်ရေးနိုးတဲ့ အချိန် – ဂျီလတ်
* ချစ်ခဲ့တာတွေ မေ့ပေးပါ – နေနေ
* ဟိုတုန်းက ချစ်သူ – စနိုး
* အချစ်နဲ့ အတ္တ – ဇမ်နူး*မိုးဟေကို*-သီချင်း
* ခိုးချစ်ရသူ – G လေး
* ပြည့်စုံပါစေ – ဘိုဖြူ
* အဖြူသက်သက် – Lလွန်းဝါ
*မင်းပဲကိုယ်ချစ်တယ် – L-လွန်းဝါ*ကျေနပ်စွာချစ်တတ်သူ – Lလွန်းဝါ
* ဒီကောင်မလေးအတွက် – ဒီဖြိုး
* အရံလူ – ရင်ဂို*တစ်နေ့ နေ့ တော့ချစ်လာလိမ့်မည် – ထွဏ်းထွဏ်း
* နေနိုင်သူလေး – ကိုင်ဇာ
10. နှမြောတယ် – ဒီဖြိုး
* မျက်ရေစိုငိုလိုက်တိုင်း – ဇော်ပိုင်
* တိတ်တခိုး – ခင်မောင်တိုး
* အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ – စိုင်းထီးဆိုင်
* ငါ့ရင်ခွင်ကို – ဇော်ဝင်းထွဋ်
* ပေးဆပ်အချစ် – ကောင်းကောင်း
*တစ်နေ့ နေ့ ရောက်ခဲ့ရင် – ရဲလေး
* တစ်ဖက်သက်အချစ် – ရန်နိုင် && T-Boy
* တိတ်တခိုးအချစ် – MC Double Nyi ( Feat: Tay Za MC)
* ပေးဆပ်ခွင့် – Unknown Artist
* ပေးဆပ်မယ့်အချစ် – ဇော်ပိုင်
* အမြဲတမ်းချို – ရင်ဂို
* သိပ်ချစ်လို့ ပါ – စုမီ
*G Latt – Way Pee Tae Nout
*Alex – A Sone That Ma Twar Buu
*L Loon War – A Lwan Yae` Nya
*Lay Phyu – A Lwan
*Marizza- Ah Lwan Mait Swe
*Aung La-A Lwan Thint Pagyi
*Arti Choat-A Lwan Nae’ Ko
*J Maung Maung-A Lwan Cafe
*Alex-Lwan Yat Tway Akyaung
*Si Thu Lwin-A Lwan Nay Nya Myar
*Myo Gyi-A Lwan Nae Yae Tae Thi Chin
*Ah Nge-A Lwan Ka Yee The
*Alex-Ta Moe Thout A Lwan
*Han Tun-A Lwan Kabyar Shay
ဆန့်ကျင်ဘက် မျိုးကြီး .mp3 - နေရောင်အောက်က မျိုးကြီး .mp3 - ပြေးလို့ကြိုပါ မျိုးကြီး .mp3 - နေခဲ့တော့ မျိုးကြီး .mp3 - နေ့သစ်တွေရှိမယ် မျိုးကြီး .mp3 - မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် မျိုးကြီး .mp3 - မလာပါနဲ့ မျိုးကြီး .MP3 - ပြောမရဘူး မျိုးကြီး.mp3 - လေပြေ မျိုးကြီး .mp3
. MP3- I M B နေချင်တယ်မင်းအနား .mp3 - I M B သနပ်ခါး .mp3 - I M B မျက်နှာ .mp3 - သိမ်းထားခွင့် N ကိုင်ရာ .mp3 - . အရင်ကဇတ်လမ်း ဟန်ထွန်း .mp3 - ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းချင်း ဟန်ထွန်း.MP3 - အပြစ်မမြင်ပါဘူး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း.mp3 - မျောလွင့်နေတဲ့တိမ် ကောင်းမြတ်လေး .mp3 - လင်းနစ် ဒီဇင်ဘာည .mp3 - လမ်းဆုံ ဇော်ပိုင် .mp3 - L ဆိုင်းဇီ သွားစို့ အဝေး.mp3 - L ဆိုင်းဇီ မလွမ်းရဲသေးဘူး .mp3 - L ဆိုင်းဇီ ဟိုတုန်းကလို .mp3
L ဆိုင်းဇီ အချစ်အတွက်ကံမကောင်ခဲ့သူ .mp3 - L ဆိုင်းဇီ မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ငါ့ရင်ထဲ .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - ခင်ဘုဏ်း မင်းအချစ်သာစစ်ပါစေ .mp3 - .mp3 - ဝေးဦးမှာလား အာဇာနည်+L ဆိုင်းဇီ .mp3 - နတ်သမီးလေး ဂရေဟမ် .mp3 - ပြန်လိုချင်တယ် L လွန်းဝါ.mp3 - အချစ်နဲ့ဘဝ - အယ်လ်နောင်း.mp3 - အင်းယားသို့ .mp3 - အဖြူရောင်သံစဉ်.mp3 - နေချင်တယ်မင်းအနား.mp3 - ခင်ဘုဏ်း မိုးပြေး .mp3 - ကာရံမလှတဲ့အတွေး Remix သူသူ .mp3 - ဘဝရဲ့တံခါး Remix ချစ်ကောင်း.mp3 -ဖြူဖြူကျော်သိန်း အနီးဆုံးလားအဝေဆုံးလား အင်္ဂလိပ်.mp3 - Numa numa Remix အင်္ဂလိပ်.mp3 - Titanic remix အဂ်လိပ်.mp3 - Home again အင်္ဂလိပ်သီချင်း .mp3 - ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - လွမ်းမပြေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - ချစ်စံအိမ် ဇတ်ဝင်သီချင်း MP3
ဘယ်သူမှ အာဇာနည်+စည်သူလွင်.mp3 - နားလည်ပါ Big bag.mp3 - မင်းအကြောင်းအိမ်မက် L လွန်းဝါ+စည်သူလွင်.mp3 - အတူတူဆိုရင် ထွဏ်းထွဏ်း+လေးလေးဝါး.mp3 - တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ အဖွဲ့ .mp3 - ထာဝရဖြစ်စေ Lဆိုင်းဇီနှင့် အဖွဲ့.mp3 - ရတုအဆက်ဆက် ဆူဇီ.mp3 - စိတ်ညစ်မှာဆိုး L လွန်းဝါ+ဆူဇီ .mp3 -My love.mp3 အာဇာနည်၏သီချင်းကောင်းများ ရင်ခွင်သစ် အာဇာနည် .mp3 - ရွှေလည်တိုင် အာဇာနည် .mp3 - စည်းတစ်ဘက်ခြား အာဇာနည် .mp3 - မင်းနဲ့ နီးချင်ပြီ အာဇာနည် .mp3 - ကြေပါစေ အာဇာနည် .mp3 - ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် အာဇာနည် .mp3 - ကိုယ့်အနားရှိစေချင် အာဇာနည်.mp3 - ဂန္ဒဝင်ဆည်းဆာ အာဇာနည် .mp3 ဘယ်သူမှ အာဇာနည်+စည်သူလွင်.mp3 - နားလည်ပါ Big bag.mp3 - မင်းအကြောင်းအိမ်မက် L လွန်းဝါ+စည်သူလွင်.mp3 - အတူတူဆိုရင် ထွဏ်းထွဏ်း+လေးလေးဝါး.mp3 - တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ အဖွဲ့ .mp3 - ထာဝရဖြစ်စေ Lဆိုင်းဇီနှင့် အဖွဲ့.mp3 - ရတုအဆက်ဆက် ဆူဇီ.mp3 - စိတ်ညစ်မှာဆိုး L လွန်းဝါ+ဆူဇီ .mp3 -My love.mp3 D ဖြိုး ဒီကောင်မလေးအတွက်.mp3 - D ဖြိုး အိပ်မက်နိဂုံး .mp3 - D ဖြိုး နှမျှောတယ်.mp3 - ဆည်းဆာအလှခွေသစ်မှ ဇော်ပိုင်၏ သီချင်း ပြည့်စုံလွန်း.mp3 - ဆည်းဆာအလှ ခွေသစ်မှ ချမ်းချမ်းသီဆိုထားသော " ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့ ကျမချစ်သူ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရှုပ်ထွေးခြင်း.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ မင်းသမီး.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လမ်းမခွဲကြေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လေပြေ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရပ်.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ အပြုံးလေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ပြိုလဲကြေကွဲ .mp3 ဝိုင်ဝိုင်း၏သီချင်းကောင်းများ မေ့မှာပါ ဝိုင်းဝိုင်း .mp3 - လွမ်းနေဦးမယ် ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - ဝဋ်ကြွေ ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - လမင်းနဲ့ပင်လယ် ဝိုင်းဝိုင်း .mp3 - စည်း ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - မဆုံတဲ့ ဖူးစာ ဝိုင်းဝိုင်း .mp3 - အိမ်ပြန်ချိန် ဝိုင်းဝိုင်း - သီချင်းမဲ့ဂစ်တာ ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - အချစ်ငှက် ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - ဖြေသိမ့်လိုက် ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 -